ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - TC ထုတ်လုပ်သူ
iPhone XS MAX အတွက်ခက်ခဲသောမျက်နှာပြင်အစားထိုး
Incell lcd အစားထိုး iPhone 11
Incell iPhone 11 pro အတွက်အစားထိုး LCD
Incell lcd အစားထိုး iPhone 11 Pro Max
Incell lcd အစားထိုး iPhone XR
iPhone 6G အတွက် LCD မျက်နှာပြင်အစားထိုးခြင်း
iPhone 6P အတွက် LCD မျက်နှာပြင်အစားထိုးခြင်း
iPhone 6S အတွက် LCD မျက်နှာပြင်အစားထိုးခြင်း
iPhone 6SP အတွက် LCD မျက်နှာပြင်အစားထိုး
iPhone 7G အတွက် LCD မျက်နှာပြင်အစားထိုး
iPhone 7P အတွက် LCD မျက်နှာပြင်အစားထိုးခြင်း
iPhone 8G အတွက် LCD မျက်နှာပြင်အစားထိုးခြင်း
iPhone 8P အတွက် LCD မျက်နှာပြင်အစားထိုးခြင်း
TC သည်မိုဘိုင်းဖုန်းအတွက် LCD & OLED မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်ကို R&D၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင်အထူးပြုကျွမ်းကျင်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တရုတ်နိုင်ငံရှိမိုဘိုင်းဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းဈေးကွက်တွင်အဓိကကျသောမျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
TC ၌ ၀ န်ထမ်း ၅၀၀ ကျော်နှင့်စတုရန်းမီတာ ၅၀၀၀ ကျော်သောအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲareasရိယာများရှိသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်ဖုန်မှုန့်၊ အဆက်မပြတ်အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆအလုပ်ရုံများဖြစ်ပြီးစတုရန်းမီတာ ၁၀၀ ကျော်အတန်းအစားဖုန်မှုန့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတွင် R&D အဖွဲ့ ၀ င် ၂၀ ကျော်ပါ ၀ င်သောအားကောင်းသောနည်းပညာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ရှိသည်။ ပြုပြင်ခြင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာနှင့်အရည်အသွေးတွင်ကျွမ်းကျင်သောအင်ဂျင်နီယာ ၅၀ ကျော်ရှိသည်။
ကုမ္ပဏီတွင်အလိုအလျောက် COG ၄ ခု၊ FOG ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ၊ အလိုအလျောက်အလွှာစုံလိုင်း ၅ လုံး၊ အလိုအလျောက်တပ်ဆင်ထားသောနောက်ဘက်လိုင်း ၄ ခုနှင့် ၈၀၀K pcs ထုတ်ကုန်များကိုလစဉ်တင်ပို့ခြင်း၊ အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ပစ္စည်းကိရိယာများသည်ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးနှင့်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကိုသေချာစေနိုင်သည်။
TC သည်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုကျင့်သုံးသည်။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ၊ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့်ကျွမ်းကျင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ယုံကြည်မှုနှင့်ဂုဏ်တင်မှုကိုရရှိခဲ့ပြီးပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရေရှည်ကောင်းမွန်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထပ်ခါတလဲလဲစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် TC ထုတ်ကုန်များသည်ပြသမှု၏အရောင်၊ အရောင်ပမာဏ၊ အရောင်အသွေး၊ ကြည့်ရှုနိုင်သည့်ထောင့်နှင့်အခြားအညွှန်းကိန်းများတွင်စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သည့်အဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
TC သည်“ ဖောက်သည်များအတွက်ပထမတန်းစားပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဖောက်သည်များအားပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း” ၏နိယာမကိုလိုက်နာပြီး TC အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါသည်။ ဖောက်သည်တိုင်းအတွက်ရင့်ကျက်သောစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်စွမ်းရည်များဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုရရှိခြင်းနှင့်အတူတူပင်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်နာမည်ကောင်းရခြင်းအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် VIP အခွင့်အရေးများ။
TC သည်သင်၏လည်ပတ်မှုနှင့်လမ်းညွှန်မှုကိုနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။ သင်နှင့်ရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကိုတည်ဆောက်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍ သင်စိုးရိမ်နေဆဲလား။ သင်ဆဲပြီးနောက်ကုန်ပစ္စည်း၏ရောင်းအားအကြောင်းကိုအဆောတလျင်? ကျေးဇူးပြုပြီးမင်းရဲ့ပြproblemနာကိုငါတို့ဆီချန်ထားပါ။ ကုမ္ပဏီသည်သင်၏လည်ပတ်မှုကိုစိတ်အားထက်သန်စွာမျှော်လင့်ပြီးသင်၏တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုနှင့်ထောက်ခံမှုကိုကြိုဆိုသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသော ၀ န်ဆောင်မှု၊ ပထမတန်းစားထုတ်ကုန်များကိုရွေးချယ်ရန်သင်မျှော်လင့်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Hot ထုတ်ကုန်များ, Sitemap, AMP မိုဘိုင်း